Nanambara ny tanàna tsara indrindra ho an'ny legioma sy legioma 2020
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanambara ny tanàna tsara indrindra ho an'ny legioma sy legioma 2020
Tamin'ny 1 Oktobra no Andro manerantany momba ny zavamaniry ary ny 1 Novambra no Andro manerantany ho an'ny legioma, ary miaraka amin'ireo vokatra hena sentetika nahazo fivarotana noho ny tsy fahampian'ny hena COVID-19, namoaka tatitra vaovao momba ny tanàna tsara indrindra ho an'ny legioma sy legioma ny 2020.
Mba hamaritana ny toerana tsara indrindra sy mora indrindra hanarahana ny sakafo mifototra amin'ny zavamaniry, dia nampitahain'ny mpandalina ny tanàna 100 lehibe indrindra amin'ny famantarana lehibe 16 momba ny finamanana an-tsaha sy zavamaniry. Ny tahirin-kevitra dia manomboka amin'ny anjaran'ny trano fisakafoanana manolotra safidy tsy misy hena ka hatramin'ny vidin'ny fivarotana ho an'ny mpihinan-kena hatrany amin'ny fivarotana salady isaky ny capita.
Tanàna 20 ambony indrindra ho an'ny legioma sy legioma
Los Angeles, CA 12. Tampa, FL
San Francisco, CA 13. San Diego, CA
Oakland, CA 19. Lubbock, TX
Tsara indrindra vs. ratsy indrindra
• Ny Scottsdale, Arizona, dia manana ny trano fisakafoanana betsaka indrindra manolotra safidy tsy mihinan-kena, 27.76 isan-jato, izay avo 12 heny noho ny any Laredo, Texas, ilay tanàna manana 2.31 isan-jato ambany indrindra.
• Scottsdale, Arizona, no manana ny anjaramanitra avo indrindra manolotra safidy vegan, 16.01 isan-jato, izay avo 16.7 heny noho ny any Garland, Texas, tanàna misy 0.96 isan-jato ambany indrindra.
• San Francisco no manana ny fandaharanasa fambolena tohanan'ny vondrom-piarahamonina betsaka (isaky ny fakany iray an'ny mponina), 0.0172, izay 21.5 heny noho ny any San Antonio, tanàna misy vitsy an'isa 0.0008 XNUMX.
• Orlando, Florida, no manana ny fivarotana salady betsaka indrindra (isaky ny faka fakàn'ny mponina), 0.2076, izay 16.9 heny mihoatra ny any Garland, Texas, ilay tanàna misy vitsy indrindra amin'ny 0.0123.